ပန်းဝေဒနာ - ဦးမောင်သိန်း
မောင်လူအေး လက်ဆော့ထားတာပါ။ ရခိုင် ဂန္တ၀င် သီချင်း တစ်ပုဒ်ကို တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ဗြိတိသျှလို ပြန်ထားတာပါ။ မူရင်း ဆိုလိုရင်းကို မထိမိဘူး ဆိုရင်တော့ မောင်လူအေးရဲ့ ဘာသာပြန် ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း...
ရေး - ဦးမောင်သန်း ဆို - ဦးမောင်သိန်း
Sick of flower (Flower isaword supersede for girl)
ရင်ကအချိုက်ကို ဖွင့်ပြောဖို့ ဆိုကေလေးသော့
Though I wanna speak out my love from bottom of my heart,
ခင်မင်မှု အတိုင်းအတာ ပျက်ပြယ်လားဖို့ ကြောက်လှပါရေ
I really scared it will fade friendship between us
တစ်ရက်မှာ ကြင်လာနိုး တစ်နိန့်မှာ ကြင်လာနိုး
Hoping to be received kindness by one day, or another day,
အလွမ်းမျိုး ကုဋေကုဋာ ပန်းဝေဒနာကို
Such millions of sorrow, longings of sick of flower
ရင်မှာ သိမ်းထား ကြိတ်မှိတ်ခံစား ခံစားရစော် ကြာဗျာယ်လေ
Keeping secret in my mind, feeling long time already
Hope you to know, hope you to know
Such clear & soft
ကိုယ့်ရင်ထဲက မေတ္တာတရား သစ္စာစကားတိကိုလေ...
My love and loyal words from deep inside my heart
It took so many years already
Being isolated, sorrowful in heart
အချိုက်ငတ်တေ အကြင်နာ အသည်းကို
For love-starving heart
အလိုမလိုက်ဘဲ ရင်ကွဲခံစော် အခါခါလေ...
Not indulgence and felt broken-hearted so many times
ပန်းဆိုကေ မြီမှာခ နွမ်းကြွီမြီကျ ကြွီရလီဖို့လေ
If my heart looks likeaflower, it will fall down to the ground
စမ်းဆိုကေလေ့သော့ အပူမီးတောက် အသည်းလွှာအောက်မှာ ခန်းခြောက်လီဖို့ ထင်ရေ
If it looks alike to stream, it supposed to be dried under extremely hot and burnt heart...
Until the stream of my love wont be dried out
I wanna follow what my heart want to be
ကိုယ့်ရင်ထဲက သစ္စာစကား မေတ္တာစကားတိကိုလေ
My love and loyal words from bottom of my heart
Filed Under : Arakan, Translation
good job bro..i like arakan music
John Kyaw Htay said...
Here is my webpage; http://escar.be
my web blog :: axj.com
my web-site :: www.szakibazis.com
my blog - launchpad16.com
Feel free to surf to my webpage: amigosdivebelize.com
Visit my blog post: HTTP://Viv.ru/
I am really impressed along with your writing talents as well as with the format in your
My site :: http://wonderchoir.com
your post. Thanksalot and i'm takingalook
Review my web-site uactu.com
My website :: www.baygem.net
my web-site - madridian